फेरि बढेर आयाे पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर कती? हेर्नुहोस मूल्य (सुची सहित) - jagritikhabar.com
फेरि बढेर आयाे पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर कती? हेर्नुहोस मूल्य (सुची सहित)
नेपाल आयल निगमलाई भारतीय आयल कर्पोरेसनले नयाँ मूल्य सूची पठाएको छ । आईओसीले बुधबार पठाएको नयाँ मूल्यसूची अनुसार पेट्रोलमा प्रतिलिटर ८ रुपैयाँ २१ पैसा बढेको छ ।
त्यसैगरी, मट्टितेलमा प्रतिलिटर ६ रुपैयाँ ९८ पैसा बढेर आएको निगमले जनाएको छ । डिजेलमा प्रतिलिटर ७ रुपैयाँ ४ पैसा घटेको छ भने ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर १ सय २२ रुपैयाँ र हवाई इन्धन प्रतिलिटर ३ रुपैयाँ ३६ पैसा घटेर आएको निगमले जनाएको छ ।
निगमले हाल आईओसीलाई पुरानो करिब १६ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ । नयाँ मूल्य सूची अनुसार अब पेट्रोलको घाटा प्रतिलिटर २२ रुपैयाँ ९३ पैसा, डिजेलमा २० रुपैयाँ र ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर ४ सय ५१ रुपैया घाटा रहेको निगमले जनाएको छ ।
वितरणमुखी बजेट आयो : प्रतिपक्ष दल
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेटअन्तर्गत राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको छलफलमा प्रतिपक्षि दलका नेताले वितरणमुखी बजेट आएको भन्दै आलोचना गर्नुभएको छ ।
उहाँले स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गर्नुपर्ने र अपार्टमेन्ट खरिद गर्न विदेशीलाई अनुमति दिन नहुने बताउनुभयो । उहाँले महिलामाथिको बढदो हिंसा, बलात्कार रोक्न बजेटमा व्यवस्था नभएकामा ध्यानाकर्षण गराउँदै बलात्कृत महिलाको जीवनयापनको जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।